नयाँ सौर्यमण्डल ‘केपलर–९०’कोे फेला पर्यो आठौं ग्रह ! (भिडियो) - Koshi Online
नयाँ सौर्यमण्डल ‘केपलर–९०’कोे फेला पर्यो आठौं ग्रह ! (भिडियो)
हालै मात्र अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले हाम्रो सौर्यमण्डल जस्तै अर्को ‘केपलर–९०’ नाम दिइएको सौर्यमण्डलको आठौं ग्रह भेटिएको खुलासा गरेको हो ।
पृथ्वीबाट २ हजार ५४५ प्रकाश वर्ष टाढाको दुरीमा रहेको यस सौर्यमण्डल नासाको केपलर स्पेस टेलिस्कोपको मद्धतले पत्ता लगाइएकाले यसको नाम ‘केपलर-९०’ राखिएको हो । हाल नासाले नयाँ सौर्यमण्डलको खोज तथा अनुसन्धानमा केपलर स्पेस टेलिस्कोपको मद्धत लिने गर्दछ ।
केपलर–९०’ नाम दिइएको यस सौर्यमण्डलका ग्रहहरु भने धेरै नजिक घुमिरहेका र सुर्य हाम्रो सुर्यभन्दा केहि बढी तातो र आकारमा पनि हाम्रो सौर्यमण्डल भन्दा केहि ठुलो रहेको नासाले उल्लेख गरेको छ । यस नयाँ सौर्यमण्डलको अन्य सातओटा ग्रहहरु यसअघि नै फेला परिसकेका थिए।
यस ग्रहको खोजमा नासासँग गुगलको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सफ्टवेयर’ का इन्जिनियर क्रिस्टोफर शैलुले सहकार्य गरेका थिए । उनका अनुसार हाम्रो सौर्यमण्डलमा जस्तै ‘केपलर–९०’ ताराको चारै दिशामा ती आठ ग्रहहरुले चक्कर लगाइरहेका छन् ।
नयाँ सौर्यमण्डलको यस आठौँ ग्रहको नाम ‘केपलर ९० आइ’ राखिएको छ । यस ग्रहले आफ्नो मुख्य तारा ‘केपलर–९०’लाई एक चक्कर लागाउन करिब १४.४ दिन लगाउँछ भने यस ग्रहको अनुमानित तापक्रम ४२५ डिग्री सेल्सियस् रहेको नासाले उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो एक दशकमा ब्रह्मान्डमा रहेको ताराहरुको वरीपरी घुम्ने करिब ३५०० ग्रहहरुको खोज गरिसकेको नासाको दाबी रहेको छ ।